Kusvirana nezvinhu zvisiri vanhu kana kusvira mawoko | Nhau Dzevakuru
Home Ask Tete Kusvirana nezvinhu zvisiri vanhu kana kusvira mawoko
Every week kune vanhu vakawanda varikubvunza kuti murume kana mukadzi kana ari ega angabvisa sei zemo. Mhinduro iri pachena ndeyekuti munhu wese anoziva kuti maoko anoshandiswa sei kuzvibvisa zemo. Iripo nguva yaunongoerekana wava nezemo murume kana mukadzi wako asipo pamba.
Unokwanisa kumbozama kusafunga nazvo asi pamwe zemo hariyendi kusvika waribvisa. Kuvanhukadzi hazvitinetsi kuita. Vashoma vanoda kuzvipinza chimwe chinhu mukati. Vakadzi vazhinji kungozvikwiza panyama dzakapoteredza kabhinzi kusvika wazvitundisa. Wombotura mafemo. Wozobvapo zemo hauchina wotoita mabasa ako emumba zvakanaka.
Variko havo vanotsvaga chekupinza mukati asi vashoma uye manakiro azvo anotora nguva kuti utunde. Kuvanhukadzi, kupinza chinhu mukati mako hachisi chinhu chakanaka, nokuti unokwanisa kupinza ma bacteria asiriwo mukati mako. Kana zemo rakukurira ukaona kuti unonzwa kuda kupinza chimwe chinhu, tanga wachigeza nesipo. Kune zvakawanda zvinokwanisa kupinzwa mukati. Kana uri mhandara usafunga kupinza zvinhu mukati mako.
Zvino varume ndonzwa vachiti maoko anonaka nekuti iwe muridzi unonzwisisa puresha yaunozvisvira maoko ako nayo. Asi vamwe vanoda pekupinza mboro. Vamwe vanoti unokwanisa kusvira manhanga akaita semavise (water melon) nekuti mukati mao makanyorovera semukati memukadzi. Asi zvinonzi unotanga waisa water melon rako mumicrowave woisa papower iri pasi nenguva dikidiki woridziisa wombomira wodziisazve kusvika rava kudziya zvakaita semunhukadzi. Zvadaro woboora buri rakakwanirana nemboro yako woisa banga mukati wowedzera kudzika kweburi kuti ukwanise kupinza mboro yako yese.
Dzosera mumicrowave udziise vise rako kana radziya zvakakwana ndipo paunokwanisa kupinza mboro wonakirwa naro. Kuona kwangu ndezvokungoti hazvo zemo rinoda kubviswa kana rauya asi zvimwe zvinhu tanga wazvitarisira kuti hazvikuvadzi here. Apa hapana chinokuvadza asi unofanira kuona kuti mune kunyorova kwakakwana nekuti unokwanisa kuzvisvuura mboro.
Asi tichitarisa kuti pane zvimwe here zvinotaridzika kunaka kwazvo tinoona kuti:
1. Watermelon harina chirwere chaungakwanisa kubata kana tichikombeya nehure, zviri nani kuzvitengera watermelon rako rogara mumba kusvika wakuda kurisvira.
2. Watermelon haridhuri kuritenga chero nyika ipi zvayo. Mahure anodhura uye anokubira mari kana wabatwa nehope.
3. Watermelon harina nguva, chero pawadira. Hure rinoda ukasire kuti rigoenda kumwe kwariri kudiwa.
Asizve ndinogaroudza vanhu kuti kana ukanzwa muviri wako uchigaroda kuisa uisana mumwe wako kana munhu, zvoreva kuti nguva yekuroora yasvika chiongorora upenyu hwako utange kutsvaga munhu akakodzera kugara naye semukadzi wako. Zvadaro kubva pekutanga dzidzisanai kusvirana zvinonakira mese kuti hupenyu hwenyu huve nani.
Vane zvimwe zvavanozivavo zvinobatsira munhu kna ari ega wedzerai tihwe.
Previous articleTete: Panotunda murume pakuisana mukadzi anonzwa kunakirwa here?
Next articleNdakavaisa vari two ndichivachinjanisa!